MR MRT: ဒေါ်စု ၀ဋ်လည်ခြင်း
(ဒေါ်စုနှင့် တွေ့ဆုံခန်းမှ ကောက်နုတ်တင်ပြပါသည်။)
ဒေါ်စုဟု ဆိုလိုက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်ကြောင်း ရှေးဦးစွာ မှတ်သားထိုက်၏။ ယုခု ဒေါ်စုကား ယောဂီသူတော်စင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမ၏ တရားပွဲ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်နှင့် ခံစားချက်တို့ကို ကြုံကြိုက်၍ မျှဝေသူသာ ဖြစ်ပေ၏။
“ဒီလိုရာသီမျိုး တရားနာရတာမှ အဆင်ပြေတာပါ ဦးဇင်းရယ်။ မဟုတ်ရင် ဖုန်နဲ့ ချွေးနဲ့ . . . တရားနာရတာ သိပ်အဆင်မပြေချင်ပါဘူး။ ဒီပွဲကတော့ အိုကေပဲ။ တရားဟောကလည်း ကောင်းလိုက်တာ ဦးဇင်းရယ်။ ဓမ္မပူဇာတွေကလည်း ရလိုက်တာ။ တပည့်တော်ကတော့ တစ်သောင်းပဲ လှူခဲ့တာပါ။ ပိဋကတ်တော်တင် မကဘူး။ ကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ အကြောင်းတွေပါ ထည့်ဟောတာဆိုတော့ ဗဟုသုတလည်း တိုးတာပေါ့ ဘုရား။ ထိတ်လန့်သံဝေဂ ရစရာလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ် ဦးဇင်းရယ်။ ထိတ်လန့်သံဝေဂ ဆိုတာထက် . . . တပည့်တော်ဖြင့် တရားနာရင်း ကြက်သီးမွှေးညင်းတွေတောင် ထတယ် . . .။ ကြောက်တာပေါ့ ဦးဇင်းရယ်။ တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေမှာ သတ်ကုန်ဖြတ်ကုန်ကြပြီတဲ့။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေလည်း ဖျက်ပစ်တယ် ဆိုပါရောလား။ အင်း . . . အဲ့ဒီတော့ . . . တပည့်တော်တို့ မဲပေးမှားရင် အဲ့ဒီလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရမယ် . . . ကုလားတွေ ၀င်လာမယ်ဆိုတော့ . . . ဘယ်သူ့ကို မဲပေးရမှန်းတောင် . . . အင်း . . . စဉ်းစားရ ခက်နေပါပြီ ဘုရား . . .။”
“သဘောပေါက်ပါပြီ။ ဖြစ်ရလေ ဒေါ်စုရယ် . . .။ ကိုယ့်အသက်အရွယ်၊ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုယ်ရထားတဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီလေး အားနာပါ့အုံး။ ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်ရတာလဲ။ ဘာတွေ စဉ်းစားရ ခက်နေတာလဲ။ မဲပေးဖို့ ကိစ္စကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။ ဘာမှ မှတ်ချက် မပေးချင်ပါဘူး။ ကုလားတွေ ၀င်လာမှာ ကြောက်တယ်ဆိုတာတော့ . . . ဟား ဟား ဟား . . . အဲ့ဒါ . . . ၀ဋ်လည်တာပဲ။”
“ဘယ်လို . . .။ ဘာ ၀ဋ်လည်တာလဲ ဘုရား။”
“ဒီလို ဒေါ်စုရေ။ ဒေါ်စုရဲ့သား မြတ်ခိုင် ငယ်ငယ်တုန်းက . . . ကလေးကို ကုလားနဲ့ ခြောက်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ကလေးငိုရင် ကုလားကြီးလာပြီ၊ ကုလားကြီး ဖမ်းလိမ့်မယ် . . . တိတ်တိတ် . . .ဆိုပြီး ကလေးအငိုတိတ်အောင် ခြောက်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒေါ်စု တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော်များများ . . . ဒီလိုပဲ ခြောက်ကြတာပါ။ တောရွာတွေမှာ ပိုများတာပေါ့။ ခု အဲ့ဒါကြောင့် ၀ဋ်လည်နေကြတာ။ ဟား ဟား ဟား။”
“ဆရာတော်ဘုရား ဟောတဲ့ တရားထဲကလို . . . ကုလားတွေ ၀င်လာမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဘုရား။”
“အင်း . . . ၀င်တာ့တော . . . ကုလားတင် မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ရော . . . ဘယ်လိုလဲ။ တကယ်တော့ ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ကျူးကျော်တဲ့ အနေနဲ့ ၀င်မလာနိုင်အောင် တားမြစ်နိုင်မှ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကဲ ဟုတ်ပြီ။ ကြောက်စိတ်လျှော့ပြီး ပြန်စဉ်းစား။”